အန်းဒရွိုက်များအတွက်ကစားတဲ့ | Coinfalls ကာစီနို | Offers Up To £200!
အန်းဒရွိုက်များအတွက်ကစားတဲ့ | Coinfalls ကာစီနို | £ 500 စေရန် Up ကိုကမ်းလှမ်း!
အကောင်းဆုံးတချို့က အန်းဒရွိုက်များအတွက်ကစားတဲ့ Apps on the Android Gaming System to be Seen and Play Exciting £ 500 နိုင်ရန်နောက်ထပ်အပိုဆု Up ကိုကမ်းလှမ်း!
အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းဖုန်းဖုန်းများ Vogue အတွက်ယနေ့. အခြားမည်သည့်မိုဘိုင်း operating စနစ်များထက်ပိုမို, အန်းဒရွိုက်တူပေါ်တွင်အခြေခံ Android နှင့်လောင်းကစားရုံဂိမ်း ကစားတဲ့ Android အတွက်အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူသန်းပေါင်းများစွာ၏စိတ်နှလုံးကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ. ကို Android မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများယနေ့မိုဘိုင်းဆယ်လူလာ devices များနှင့်နိုင်ငံတကာမိုဘိုင်းဖုန်းစျေးကွက်များတွင်နောက်ဆုံးပေါ်အလွင်ပင်အရသာရှိပါတယ်.
၎င်း၏စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက 2008, ကို Android စနစ်ကလုံးဝပြောင်းလဲနှင့်နိုင်ငံတကာဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေရေးရာလောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဘုံရန်နှင့်အစွန်းရောက်ကျော်ကြားမှုနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အယူခံ၏သစ်တစ်ခုအမြင့်သို့ခြီးမွှောကျခဲ့သည်.
2) အန်းဒရွိုက်၏အထူးသဘာဝတရား, အ Difference ခံစားမိ – အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်အခမဲ့ဒီမို Play!
အပိုဆုအတွက်£ 500 စေရန် Up ကိုရယူနိုင်သော!
ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်မူဝါဒက၎င်း၏အထူးသဘာဝရှိနေသော်ငြားလည်း, ဒါကြောင့်အားပေးကိုလည်းသီးခြားလွတ်လပ်သည့်ဒီဇိုင်နာများက Android device များအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် applications များဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု. ဤသည်တစ်ချိန်ကကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျအားလုံးမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်စမတ်ဖုန်းများအကြားအကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်းစားခဲ့ကြရာဘလက်ခ်ဘယ်ရီဖုန်းတွေကို၏ကျော်ကြားမှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းမှဦးဆောင်ခဲ့သည်. တစ်ဈေးကြီးအပိုင်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည့်တောင်မှ iPhone ကိုယခုအစာရှောင်ခြင်းအပြေးနှင့်လူကြိုက်များမှုမှတက်ကိုက်ညီရန်ခက်ခဲကြိုးစားနေပုံရပါတယ်နှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ အန်းဒရွိုက်.
ပို 70% အဖွဲ့ဝင်, ဘုံကလူနှင့်နိုင်ငံတကာဂိမ်းဇာတ်လမ်း၏စစ်ပြန် ardently ကို Android မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြု, ဟန်းဆက်, စမတ်ဖုန်းများနှင့် Android tablet များ. သူတို့ကအခြား counterparts တွေကိုနှင့်ပြိုင်ဘက်လည်ပတ်မှုစနစ်များကိုကျော်က Android ကိုပိုနှစ်သက်.
3) အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းကစားတဲ့ကာစီနိုဂိမ်း / Coinfalls မှာ Android အတွက် virtual ကစားတဲ့
ဒါပေမယ့်ပင်ပြီးတော့, အဘယ်သူမျှမပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့ပ်ခဲ့သူတွေကိုတခါသာကြွယ်ဝသောဂိမ်းဖြစ်စဉ်းစားခဲ့ကြသောထိုစွဲလမ်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းရဲ့ပျော်စရာခံစား, ထိပ်တန်းအတန်းအစားနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အထက်တန်းလွှာလူတို့သညျအစဉျအမွဲကစားနိုင်!
ဤသည် Android လောင်းကစားရုံဂိမ်း application များ၏မှတ်ပုံတင်နှင့် downloads, အတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်၏ခေတ်ထဲမှာပို့ဆောငျကို Android မိုဘိုင်းစနစ်၏နိဒါန်းနှင့်မြင့်တက်.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာတစ်ခုသို့မဟုတ် Laptop ကိုမပါဘဲလူတွေတောင်မှလွယ်လွယ်ကူကူပဲကို Android application ကိုစတိုးကနေ Android အတွက်ကစားတဲ့ကဲ့သို့လောင်းကစားရုံ applications တွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲအားဖြင့်ဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ် (Google Play စတိုး). ဤအပလီကေးရှင်းအများစုမှာမည်သည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရတဲ့သို့မဟုတ်ဆက်ကြောင်းမှုနှင့်လည်းသူတို့စရိတ်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း. ဒီကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသမျှသောအိမ်သူအိမ်သားမှနိုင်ငံတကာဂိမ်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းယူကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်!